Ciidamada Soomaaliya oo "dilay" in ka badan 100 dagaalame oo Shabaab ah
Korneel Cismaan Shabeel, afhayeenka ciidanka xoogga
MUQDISHO, Soomaaliya – Taliska Milatariga Soomaaliya ayaa shaaciyey in howlgalkii ay kula wareegeen magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dileen in ka badan 100 dagaalame oo Al-Shabaab ahaa.
Korneel Cismaan Shabeel, afhayeenka ciidanka xoogga, oo la hadlay warbaahinta, ayaa tilmaamay in dhankooda uusan soo gaarin khasaaro.
"Anigoo been iska dhowraya waxaan indhaheygu ku arkay 142 dhimasho ah," ayuu Shabeel ku adkeystay, wallow aysan soo bandhigin. "Dhaawacyaddu waxay gaarayaan 29; 18 maxbuusna waan ka haynaa," ayuu xusay.
Isagoo hadalkiisa sii wata, Korneel Shabeel ayaa carabka ku dhuftay in ay kusoo furteen 21 xabo oo qori ah isuguna jira; AK47, Baasuuke iyo Beekee'emyo.
Intii lagu guda jiray shirka jaraa'id, sarkaalka ayaa adkeeyay ahmiyadda istaraatiijiyadeed oo ay leedahay magaaladda Janaale
"Janaale waa la socotaan waxay ahayd saldhigii ugu weynaa ee argagixisada, Janaale waxay ahayd marinka iyo dhaqaalaha meesha ay ka helaan iyo waddooyinka gobolada oo dhan isku xira," ayuu raaciyey.
Janaale, oo caan ku ah beeraha, ayaa qiyaastii waxay Muqdishu u jirtaa 95 KM, taas oo ka dhigan in loo socon karo ku dhowaad 40 daqiiqo.
Marka laga soo tago sheegashada ciidamada Soomaaliya, ma jiro wax war ah oo ku aadan khasaaraha oo kasoo baxay xoogaga hubeysan.
Dhanka kale, Korneelka oo balanqaadey in ay gacanta kusii hayn doonan nabad-gelyadda Janaale ayaa tibaaxay in ay magaalada kusoo celiyeen 1,500 oo horey uga barakacay isla markaana ay u qeybiyeen cunto.
Al-Shabaabka laga saarey Janaale ayuu ka shanqariyey "in ay u baxsadeen saddex meelmood, waana ka dabatagi doonaa".
Qabashada Janaale waxaa ka qeyb-qaatay ciidamo huwan oo isugu jira Soomaali, AMISOM iyo Ameerikaan. Diyaaradaha cirka ee Mareykanka waxay sidoo kale kaalin weyn ka cayaareen baacsiga dagaalameyaasha Shabaab.
Madaxii canshuuraha Al-Shabaab ee Shabeellaha Hoose oo la qabtay
Soomaliya 19.03.2020. 07:32
Horjoogahaan iyo ilaaladiisa ayaa nolosha lagu hayaa kadib howlgalka ay sameeyeen ciidamada kumaandooska Soomaaliya.
Taliyaha Ciidamada Soomaaliya oo "ka badbaadey" isku day dil
Soomaliya 01.04.2020. 07:29
Khasaaraha Al-Shabaab kasoo gaarey howlgalka Janaale oo la shaaciyay
Soomaliya 17.03.2020. 11:38